एकपटक रोपेपछि ५० वर्षसम्म फल्ने किवीको कलमी गर्ने प्रविधि सिकौं - DURBAR TIMES
HomeUncategorizedएकपटक रोपेपछि ५० वर्षसम्म फल्ने किवीको कलमी गर्ने प्रविधि सिकौं
एकपटक रोपेपछि ५० वर्षसम्म फल्ने किवीको कलमी गर्ने प्रविधि सिकौं
किवीफल चिसो हावापानी आवश्यक पर्ने पतझड फलफुल वाली हो । विभिन्न तापक्रम र हावापानीमा हुने किवी फलको जातहरुको विकास भएको छ ।
किवी फललाई उचाई अनुसार वगान व्यवस्थापन मिलाउन पर्दछ । बढी उचाई हुने क्षेत्र ( १६००मिटर भन्दा माथी ) छाँया हुनु हुदैन र तलको उचाईमा बढी गर्मी हुने हुनाले केही छाँया हुनु पर्दछ ।
वोटको वरीपरी वर्षामा चाडै झारपातले पलाउछ तसर्थ वर्षमा २ देखि ३ पटक सम्म गोडमेल गर्नु पर्दछ । गोडमेल गरेर निस्केको झारपातले फेदको वरीपरी छापो हाल्नु राम्रो हुन्छ ।
जेठ असार र साउन भाद्रमा पुन झार पात उखेल्नु पर्दछ र यूरिया टपड्रस गनुपर्दछ । उखेलेको झारपात छापो हाल्नु पर्दछ ।
किवी स्प्रीकंलर सिचाईले फलको गुणस्तरलाई असर पार्ने भएको पानीको अभाव भएको क्षेत्रमा थोपा सिंचाई उपयुक्त हुन्छ।
छापोको प्रयोगले माटोमा चिस्यान कायम गनुको साथै झारपात पनि आउनवाट नियन्त्रण गर्छ । त्यसैले विरुवा लगाइसकेपछि अनिवार्य छ । वगैचामा आएको झारपातलाइ गोडमेल पछि संकलन गरि वोट वरिपरी छापो हाल्ने व्यवश्था मिलाउनु पर्छ ।
किवीको विरवालाई निश्चित आकार प्रकार वा ढाचाँमा ढाल्न अपनाउने प्रविधिलाइ तालिम भनिन्छ । किवीको विरुवालाई रोपेको वर्ष देखिनै निश्चित आकार प्रकारमा ल्याउन उचित व्यवश्थापन गर्नुपर्छ ।यसले गर्दा पछिल्लो वर्षहरुमा लहराको तालिम दिने सजिलो हुन्छ । उचित समयमा बैज्ञानिक तरीकावाट तालिम गरीएको खण्डमा फलको गुणस्तरीय उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ ।
यसवाट लहराको राम्रो व्यवश्थापन भइ रोग किरा वाट वचाउन र वगेैँचामा काम गर्न सहयोग पुग्दछ । व्यवशायीक किवी खेती गर्दा २ प्रकारका तालिम पद्धति अपनाइन्छ ।
विशेष गरि २००० मिटरको उचाई भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा यस्तो आउने सम्भावना हुन सक्छ । तर स्थान विशेषको विशेष परिस्थितीमा पनि यो समस्या देखिन पनि सक्छ ।
लामो अवधि सम्म रहने फलफुलहरु मध्ये किवीफलको अलग्गै विशेषता छ । अन्य फलफुलहरुको जस्तै जरा गहिरो जादैन । सतहको २ फिटसम्मको मात्रै जरा रहने भएकोले सतहको माटो चाडै सुख्न र सुख्खाको असर पर्दछ । माटो सुख्खा भएको अवस्थामा बाटको विकासमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । पातहरु खैरो अनि पहेलोपना देखिन थाल्छ , पात खुम्चिन थाल्छन् । पातका किनारा डढ्न थाल्छन् ।
यसको अवश्थामा सिंचाई गरिदिनु पर्र्छ । चिस्यान कायम राख्न फेदमा भुस वा परालले छोपिदिने गर्नुपर्छ ।
धेरै चर्को घामले पनि किवीफललाई असर पुर्याउछ । खास गरि मुख्य हागाँ, डाठहरु, फलहरु नागो देखिने अवस्थामा यसरी घामको असर पर्दछ । यसको असरमा डाठको वा फलको बोक्रा फुट्ने , खुईलिने लक्षण देखा पर्छ । यसको व्यवस्थापनको लागि घामको असरको अवस्था देखा पर्ने स्थानहरुमा कांटछाट ९हिउदे र वष० गर्दा केही मात्रामा पातहरु आउने मुनाहरु राखि दिनु पर्दछ , जसले गर्दा फलतथा डाठ नांगो हुने अवस्था आउन दिनु हुदैन ।
बढी हावाहुरी आउदा लहराहरु र सपोर्र्ट तार हल्लि रहनाले फल रगडिएर फलको गुणस्तर विग्रिन जान्छ । फल रगडिंदा घाउ चोट आएर छिट्टै गल्ने पाके जस्तो हुने , कुहिने आदि हुन सक्छ । यसको व्यवस्थापनको लागि हावा हुरी आउने दिशातिर घना पातहरु हुने बोट बिरुवा लगाई हावा छेक्ने उपाय अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
नेपालको किवी फल लगाउने क्षेत्रमा असिनाको असरको लागि सम्वेदनसील क्षेत्र पनि हुन् । असिनाले फल , मुना, पात , हांगा आदिलाई क्षती पुर्‍याउछ । फलस्वरुप लागेका फलहरुलाई मात्र असर नगरी अर्को वर्षको उत्पादनलाई समेत असर पुर्‍याउछ ।
किवी वालीमा लाग्ने कीरा र रोगको व्यवश्थापन
खैरो टाउको भएको झुसिलकिरा प्रजातिवाट वढि क्षति गरेको पाइन्छ । वयस्क कीरा पहेलो खैरो रङगको ८–१२ मि. मि. को हुन्छ , कलिलो पातको माथिल्लो भागमा फुल पार्छ ।लार्भाले कलिलो पात एवं चिचिलो अवश्थामा रहेको फलको वोक्रा खाई क्षति पुर्‍याउछ र फलको विकृति ल्याउनुको साथै गुणस्तर विगार्छ ।
कीरा लार्भा टिपेर मार्न पनि सकिन्छ । आवश्यक भएमा संपर्क किटानासक जस्तै मालाथायन, साइपरमेथि«न प्रयोग गर्न सकिन्छ । सर्वोआयल १० मि.लि. प्रति लि. पानिमा मिसाइ १ हप्ताको ३ पटक प्रयोग गर्न प्रभावकारी हुन्छ । नीम तेल ३ मि. लि. प्रति लि पानिमा मिसाएर १ हप्ताको फरकमा ३ पटक छर्न उपयुक्त हुन्छ ।
कीरा धेरै मसिनो खरानी रङ देखि खैरो रङको हुन्छ । कत्ले किराबाट किवी खेतीमा बढि नोक्सानी भएको पाइएको छ ।
यो किराले डाठँको , पातको मध्य नसामा र फलमा बसेर रस चुस्ने गर्दछ । रस चुस्ने गर्दछ । रस चुस्न बसेको स्थानमा किराहरु टासिएर बसेका हुन्छन् किराको सङ्ख्या धेरै भएमा खप्टीएर बसेका देखिन्छन् । यो किरा लागेको वोटहरुमा पातहरु कम हुने तथा वोट रोगी जस्तो देखिन्छ । फलहरु क्म लाग्ने , गुणस्तरमा विकृती आउने र अन्त्यमा माथिल्ला हाँगाहरु सुक्दै गइ वोट समेत मर्दछ ।
सर्वो तेल १५ मि.लि. प्रति लि. पानिमा मिसाएर १ हप्ताको फरकमा ३ पटक छर्ने, निम तेल ३ मि.लि. प्रति लि पानिमा मिसाएर एक हप्ताको फरकमा ३ पटक छर्ने यी विषादिहरु विशेष गरी पौष देखि फाल्गुन महिना सम्म छर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।
किराको वयस्कले विरुवाको पात डाठ तथा फलमा रस चुसी हानि नोक्सानी पुर्‍याउछ र पछि गुलियो मह जस्तो पर्दाथ निस्काषन गर्छ । यसमा सुटिमोल्ड ढुसि पैदा भई पात डाँठ फल कालो भइ विकृति आउछ ।
आश्रित बिस्वाको नियन्त्रण गर्ने, वालीमा नियमित रुपमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । यदि किराको धेरैले प्रकोप छ र वोट कमजोर हुदैँ गएको छ भने दैहिक विषदि नियमीत रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सर्वो आयल १० मि.लि. प्रति लि पानीमा हप्ताको अन्तरमा ३ पटक स्प्रे गर्नुपर्छ ।
धेरै ओसिलो माटो एवं पानी जम्ने वा निकास नभएको स्थानमा रोगको प्रकोप बढि देखिन्छ ।
विभिन्न अवस्थाका फुल, फलमा सक्रमित भएको फल भएमा पछि वोटाटिस लाग्दछ ।
यो रोग किवी वगैँचामा खासै देखा नपरेतापनि सधैँ एक स्थानमा नर्सरी राखेमा नर्सरीमा देखा पर्न सक्छ त्यसैले विरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी २–३ वर्षमा परिवर्तन गरिरहनु पर्छ । नर्सरी वा वगैँचामा यो रोग देखा परेमा विरुवा उखेली जलाइ नष्ट गर्नुपर्छ ।
यस रोग लाग्दा खास गरी फूलको पत्रदल सेतो रङवाट खैरो रङमा परीणत भइ फक्रनु अघिनै झर्छ । त्यस्तै पुंकेसर पनि खैरो भइ परीपक्क हुन पाउदैँन ।
एक देखी दुई आँख्ला भएको सायनस्टिक टुक्राई सायन र रुटस्टक दुबैलाई छड्के पारी काट्नु पद्र्रछ । दुबैलाई छड्के पारि काटिएको स्थानमा बिचबाट ठाडो काटेर दुबैलाई फंसाएर टम्म मिलाएर राम्ररी जोड्नुपर्छ । जोडिसकेपछि ग्राफ्टीङ टेपले हावा र पानि नर्छिर्ने गरी बाँधि दिनुपर्छ । सायनको माथि पटटी काटिएको घाउमा संक्रमण हुन नदिन र सुक्न नदिन मैन वा पाराफिल्म वा पेष्ट लगाउनु पर्दछ ।
यो प्रविधिबाट विरुवा तयार गर्दा २ वर्ष लाग्छ ।पहिलो वर्ष रुटस्टक विरुवा तयार गर्नुपर्दछ र दोस्रो वर्ष कलमी गरी विक्री लायक विरुवा तयार गरिन्छ । कलमी गर्ने बिरुवाको तरा तर्फको फेद भागलाई मुलबृत्त (रुटस्टक) भनिन्छ । किवीको रुटस्टक किविफलको बीउ उमारेर तयार गरिन्छ । किवीफलको विरुवा उत्पादन गर्न पहिलो वर्ष रुटस्टक विरुवा तयारी गर्नु प्रमुख र प्रविधि सहज नहुजेल कठिन काम हो । नेपालको पहाडी जङगलमा किवी पाईने भएकाले यसको बिउ संकलन गरि उमारेर रुटस्टक बनाउन सकिन्छ । तर जङगली किवीको रुटस्टकको मोटाई किवीफलको जोड्ने हाँगा साईन भन्दा मसिनो हुने भएकाले समस्या हुने देखिएको छ । बागवानी फार्म दोलखाको बोचमा जङगली किवीफलको रुटस्टक विरुवा तयार भएको छ ।
सायन स्टिक रोग किरा नलागेको स्वस्थ हाँगा, आँख्ला प्रष्ट देखिने तथा पोटिलो हुनुपर्दछ । जात एकिन भएको र भाले पोथि छुट्टा छुट्टै राखेको वा एकिन भएको हुनुपर्दछ । सायन ६ महिना देखि डेढ वर्ष सम्मको पेन्सिल साईजको हुनुपर्दछ ।
विउ उमार्नका लागि कोकोपिट –
मधुमास लाई सिड ट्रेमा भरि १० से.मि. को फरकमा लाइन कोरी एकनासले छरी आधा से।मि बाक्लोगरी छोप्ने दिनमा २० डिग्री र रातमा १० डिग्री से. तापक्रम कायम भएमा २,३ हप्तामा बिरुवा उम्रन सुरु हुन्छ ।
Previous articleविद्युत निर्यात ह्वात्तै बढ्यो!
Next articleसरकारको वहिर्गमनको माग गर्दै थाइल्याण्डमा हजारौँको प्रदर्शन